သက်သေခံချက်များ – အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်
January 21, 2020 kingdomsalvationmyLeaveacomment
ဘုရားသခင်၏ နှစ်ခြောက်ထောင် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်က အဆုံးသို့ ရောက်လုနီးပြီ ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ဘုရားသခင်၏ ပေါ်ထွန်းခြင်းကို ရှာဖွေသူများအားလုံးအတွက် နိုင်ငံတော်၏ တံခါးသည်လည်း ဖွင့်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ချစ်သော ညီအစ်ကို မောင်နှမတို့၊ သင်တို့ မည်သည့်အရာကို စောင့်မျှော်နေကြသနည်း။ မည်သည့်အရာကို ရှာဖွေနေကြသနည်း။ ဘုရားသခင် ပေါ်ထွန်းခြင်းကို သင်တို့စောင့်မျှော်နေသလော။ ဘုရားသခင်၏ ခြေရာများကို သင်တို့ရှာဖွေနေကြသလော။ ဘုရားသခင်၏ ပေါ်ထွန်းခြင်းကို မြင်တွေ့နိုင်ရန် လူများ အလွန်ပင်တောင့်တကြသည်တကား။ ထို့ပြင် ဘုရားသခင်၏ ခြေရာများကို တွေ့ရန်မှာလည်း အလွန်ပင် ခက်ခဲလှသည်တကား။ ဤကဲ့သို့သောခေတ် ဤကဲ့သို့သောအချိန်၊ ဤကဲ့သို့သောလောကမှာ ဘုရားသခင် ပေါ်ထွန်းသည့်နေ့ကို တွေ့ကြုံနိုင်ဖို့အတွက် မည်သည့်အရာကို ငါတို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။ ဘုရားသခင်၏ ခြေလှမ်းများကို အမီလိုက်ရန် ငါတို့အနေဖြင့် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နည်း။ ဘုရားသခင် ပေါ်ထွန်းရန် စောင့်မျှော်နေသည့် သူများအားလုံး ဤမေးခွန်းများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြရသည်။ သင်တို့အားလုံးလည်း ဤမေးခွန်းများကို တစ်ခါထက်မက စဉ်းစားဖူးကြသည်။ သို့သော် မည်သည့်ရလဒ်ကို ရရှိကြသနည်း။ ဘုရားသခင်သည် မည်သည့်အရပ်၌ ပေါ်ထွန်းသနည်း။ ဘုရားသခင်၏ခြေရာများ မည်သည့်နေရာ၌ ရှိသနည်း။ သင်တို့၌ အဖြေရှိပြီလော။ လူတော်တော်များများက “ဘုရားသခင်က သူ့နောက်လိုက်သောသူ အားလုံးအကြား၌ ပေါ်ထွန်းပြီး ကိုယ်တော်၏ ခြေရာများသည်လည်း ကျွန်ုပ်တို့အကြား၌ ရှိသည်၊ ထိုမျှပင် ရိုးစင်းလှသည်” ဟု ဖြေကြမည် ဖြစ်သည်။ မည်သူမဆို ပုံသေနည်းထဲထည့်ပြီး ထွက်လာသည့် အဖြေမျိုးကို ပေးနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ ပေါ်ထွန်းခြင်း သို့မဟုတ် သူ၏ခြေရာများဟုဆိုရာ၌ အဘယ်အရာအား ဆိုလိုသည်ကို သင်တို့နားလည်ကြသလော။ ဘုရားသခင်၏ ပေါ်ထွန်းခြင်းဟူသည်မှာ ဘုရားသခင်က သူ၏အလုပ်ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလုပ်ရန်အတွက် လောကသို့ ဆိုက်ရောက်လာခြင်းကို ရည်ညွှန်းသည်။ ခေတ်တစ်ခေတ်ကို အစပြုသည့်အမှုနှင့် ခေတ်တစ်ခေတ်ကို အဆုံးသတ်သည့်အမှုတို့ကို လုပ်ဆောင်ရန် သူ၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာနှင့် စိတ်သဘောထား၊ ထို့ပြင် သူ့နည်းသူ့ဟန်နှင့် လူသားများထဲသို့ သူဆင်းကြွလာသည်။ ဤပေါ်ထွန်းခြင်းမျိုးသည် အခမ်းအနားအသွင်တစ်ခု မဟုတ်ပါ။ ယင်းမှာ သင်္ကေတတစ်ခုလည်းမဟုတ်၊ ပုံဆောင်မှုတစ်ခု၊ အံ့သြဖွယ်တစ်ခု၊ သို့မဟုတ် ခမ်းနားသည့် မြင်ကွင်းတစ်ခုလည်း မဟုတ်ပေ။ ထို့အပြင် ဘာသာရေးဖြစ်စဉ်မျိုး သာ၍ပင် မဟုတ်ပေ။ ၎င်းသည် စစ်မှန်သည့် အချက်အလက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကိုင်တွယ်တို့ထိနိုင်သော၊ မည်သူမဆို မြင်နိုင်သောအရာဖြစ်သည်။ ဤပေါ်ထွန်းခြင်းမျိုးသည် ဟန်ဆောင်လုပ်ပြခြင်းအလို့ငှာ မဟုတ်ပေ၊ သို့မဟုတ် ရေတိုလုပ်ဆောင်မှုအလို့ငှာ မဟုတ်ပေ၊ စင်စစ်အားဖြင့် သူ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အတွင်းရှိ အလုပ်အဆင့်တစ်ဆင့်အလို့ငှာ ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ပေါ်ထွန်းခြင်းသည် အမြဲအဓိပ္ပာယ်ရှိသည့်အပြင် သူ၏စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ်နှင့်လည်း ဆက်စပ်မှုအချို့ အမြဲရှိသည်။ ဤနေရာ၌ပြောသည့် “ပေါ်ထွန်းခြင်း” ဆိုသည်မှာ လူသားကို ဘုရားသခင် လမ်းပြ၊ ဦးဆောင်ပြီး ဉာဏ်အလင်းပေးသည့် “ပေါ်ထွန်းခြင်း” နှင့် လုံးဝမတူပါ။ ဘုရားသခင်သည် မိမိကိုယ်မိမိ ထုတ်ဖော်ပြသည့် အကြိမ်တိုင်း၌ ကြီးမြတ်သော သူ့အလုပ်၏ အဆင့်တစ်ဆင့်ကို လုပ်ဆောင်လေ့ရှိသည်။ ထိုအလုပ်သည် အခြားမည်သည့်ခေတ်၏ အလုပ်နှင့်မဆို ကွဲပြားခြားနားသည်။ လူသားအနေဖြင့် မစဉ်းစားတတ်သည့်အလုပ်၊ မည်သည့်အခါကမျှ မကြုံတွေ့ဖူးသော အလုပ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ခေတ်ဟောင်းကို အဆုံးသတ်ပြီး ခေတ်သစ်တစ်ခေတ်ကို အစပြုသော အလုပ်ဖြစ်သည်။ လူတို့ ကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက် အသစ်သော အလုပ်ပုံစံတစ်ခု၊ သာ၍ကောင်းသော အလုပ်ပုံစံတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် လူသားများကို အသစ်သောခေတ်ထဲသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည့် အလုပ်လည်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ပေါ်ထွန်းခြင်းမှာ ထိုသဘောကိုဆောင်သည်။
Myanmar movie (မိခင်တစ်ယောက်၏ မေတ္တာ) | God Showed Me the Correct Way to Educate My Child
November 28, 2019 November 29, 2019 kingdomsalvationmyLeaveacomment
ရုပ်ရှင်ထဲမှဇာတ်ဆောင် ဝငျဟှေး သည် မိခင်အများစုနှင့်တူသည်။သားသမီးသည်ကျောင်းကောင်းကောင်းတက်၍တက္ကသိုလ်ဖြေဆိုအောင်မြင်မှသာ ဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်သောတစ်ခုတည်းသောလမ်းဖြစ်ပြီး ပညာသာလျှင်သားသမီးများအတွက်လှပတဲ့အနာဂတ်ကိုပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်ဟုထင်ခဲ့သည်။သမီးမှာကောင်းမွန်တဲ့ရှေ့ရေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ရန် ဝငျဟှေး သည်အလုပ်များနုတ်ထွက်၍တောင် သမီးနှင့်တူတူတက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုရန် အဖော်ပြုပေးသည်။သို့သော် သူမ၏ဖိအားများလှသောသွန်သင်မှုသည် သမီးအားစိတ်ပျက်စေပြီ လမ်းဆုံးကိုလျှောက်စေခဲ့ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးရန်အနည်းငယ်သာလိုခဲ့သည်။ဤအကြောင်းကိစ္စပြီးသည့်နောက် ဝငျဟှေး သည်အလွန်နောင်တရခဲ့သည်။မိမိလုပ်ဆောင်သည့်အရာသည်သမီးအတွက်ကောင်းဖို့ရန်သာရည်ရွယ်ခဲ့သော်လည်း သမီးအတွက်နာကြင်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းတွေသာဖြစ်စေခဲ့သည်။သူမသည် အဘယ်ကြောင့်ဤကဲ့သို့ဖြစ်သည်ကိုနားမလည်ခဲ့ပါ။ထိုသို့ဆိုလျှင် မည်သို့လုပ်ဆောင်မှသာ သားသမီးများလိုအပ်သောချစ်ခြင်းဖြစ်လာမည်နည်း။ခရစ်ယာန်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယို ဝငျဟှေး သည် သားသမီးများကို မည်သို့သွန်သင်ဆုံးမရမည်ကို နားလည်စေမည်ဖြစ်သည်။
【Live】 Best Myanmar Movie (မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း) How Are the Promises of Lord Jesus Fulfilled?
October 25, 2019 October 25, 2019 kingdomsalvationmyLeaveacomment
【Live】Myanmar Subtitle movie (မျှော်လင့်တောင့်တခြင်း) How Are the Promises of Lord Jesus Fulfilled?
လွန်ခဲ့သည့် အနှစ်နှစ်ထောင်တွင်၊ သခင်ယေရှုက သူ၏ နောက်လိုက်များကို ကတိပြုခဲ့သည်၊ “သင်တို့နေစရာအရပ်ကို ပြင်ဆင်ခြင်းငှါ ငါသွားရ၏။ ငါသည် သွား၍ သင်တို့ နေစရာအရပ်ကို ပြင်ဆင်ပြီးမှ တဖန်လာပြန်၍၊ ငါရှိရာအရပ်၌ သင်တို့ရှိစေခြင်းငှါ သင်တို့ကို ငါ့ထံသို့ သိမ်းဆည်းမည်” (ယော ၁၄:၂-၃)။ ဤအရာကြောင့်၊ ယုံကြည်သူ မျိုးဆက်များသည် သခင့်ကတိတော် ပြည့်စုံခြင်းအတွက် စွဲလမ်းစွာ မျှော်လင့်ပြီး ဆုတောင်းကြသည်။ ပြီးလျှင် သခင် ကြွလာသည့်အခါ၊ သူတို့သည် သခင့်ကို ဆုံတွေ့ရန်နှင့် ကောင်းကင်နိုင်ငံထဲသို့ ဝင်ရောက်ရန်အတွက်၊ ကောင်းကင်ဘုံသို့ ချီဆောင်ခံရကြရန်အလို့ငှာ မျှော်လင့်ပြီး၊ ဆုတောင်းကြလေသည်။Read More »
အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော် အပလီကေးရှင်
September 26, 2019 kingdomsalvationmyLeaveacomment
သခင်ပြန်လာခြင်း၏သတင်းကောင်းတစ်ပုဒ် ပုန်းအောင်းနေသော (App) တစ်ခု-
ခရစ်ယာန်အတော်များများက သခင်ပြန်ကြွလာမည်ကို စိတ်အားထက်သန်စွာ တောင့်တကြပါသည်။ ဘုရားသခင်၌အမှန်တကယ်ယုံကြည်သော သင်သညလည်း သခင်ပြန်လာခြင်း၏ သတင်းကောင်းကို မသိလိုဘူးလား။
ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရောက်ဖို့ရန် အပြစ်များကို ဘယ်လိုဖယ်ရှားပစ်ရမလဲ၊ ပညာရှိသောအပျိုကညာသည် ဘုရားသခင်၏စကားသံကို ဘယ်လိုနားထောင်ပြီး၊ သခင့်ပြန်လာခြင်းကို ဘယ်လိုကြိုဆိုသလဲ.. စသော သခင့်ပြန်လာခြင်း၏ နက်နဲသောအရာများကို နားလည်နိုင်မည့် ခရစ်ယာန်များအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော (app) တစ်ခုကို ခလုတ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနှင့် ကျွနု်ပ်တို့ ‘ဒေါင်းလုပ်’ နိုင်ပါသည်။Read More »
ဝိညာဉ်ရေးရာ တိုက်ပွဲတွင် စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းကို အောင်နိုင်ရန် နည်းလမ်း ၃ သွယ်
September 19, 2019 kingdomsalvationmyLeaveacomment
သခင့်ထံ၌ ငြိမ်သက်ခြင်းရှိကြပါစေ။ ဝိညာဉ်ရေးရာ တိုက်ပွဲများသည် တစ်ခါတရံမှ ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ကျွန်မတို့၏ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းနှင့် နောက်တော်သို့ လိုက်ခြင်း အချိန်ကာလတစ်လျှောက်လုံး ဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။ ငွေ၊ အဆင့်အတန်း၊ နာမည်နှင့်ပတ်သက်သည့် စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းများ၊ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးကြားရှိ စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းများရှိကြပြီး မယုံကြည်သူများ၏ အသရေဖျက်ခြင်း၊ ချစ်ခင် နှစ်သက်ရသောသူများထံမှ အတားအဆီးနှင့် ချုပ်ချယ်မှုတို့အပြင် ဆိုးယုတ်သော အစိုးရ၏ လိုက်လံဖမ်းဆီးပြီး ဖိနှိပ်ခံရခြင်းတို့ရှိကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် လုံးလုံး မမျှော်လင့်ထားသည့် ဘေးဒုက္ခက ကျွန်မတို့ အပေါ် ကျရောက်လာသည်။ သမ္မာကျမ်းစာထဲတွင် “ သမ္မာသတိရှိလျက် မအိပ်ဘဲစောင့်နေကြလော့။ သင်တို့၏ ရန်သူတည်းဟူသော မာရ်နတ်သည်၊ ဟောက်သောခြင်္သေ့ကဲ့သို့ အဘယ်သူကို မျိုရမည်နည်းဟူ၍ လှည့်လည်ရှာဖွေလျက်ရှိ၏။” (၁ ရှင်ပေတရု ၅:၈) ဟု ပြောထားပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်က “ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင် ဝိညာဉ်ဆိုးများ အမျိုးမျိုးတို့သည် နားခိုရန်နေရာကို မပြီးနိုင်မဆုံးနိုင် ရှာဖွေချောင်းမြောင်းလျက် ရှိကြပြီး လူသေအလောင်း များကို စားကြရန် မရပ်နိုင်မနားနိုင်ပင် လိုက်လံရှာဖွေနေကြသည်။” (နှုတ်ကပတ်တော်သည် လူ့ဇာတိ၌ ပေါ်လာ၏ စာအုပ်ထဲရှိ “ အခန်း ၁၀” စကြဝဠာ တစ်ခုလုံးအတွက် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်မျာ) ဟု မိန့်တော်မူထားသည်။ ကျွန်မတို့ နံဘေးတွင် စာတန်မရှိသည့် အခိုက်အတန့် တစ်ခုတစ်လေမျှပင် မရှိပါ၊ ကျွန်မတို့က အဆုံးသတ်တွင် ကျွန်မတို့သည် အဆုံးသတ်တွင် စာတန်အားဖြင့် တစ်ကိုယ်လုံး ဝါးမျိုခြင်းကိုခံရ စေရန်အတွက် ကျွန်မတို့အား မကောင်းမှုအတွင်းသို့နှစ်မြုပ်စေရန်၊ ဘေးအန္တရာယ် အတွင်းသို့ကျရောက်ပြီး ကျွန်မတို့ကိုယ်ကျွန်မတို့ ဘုရားသခင်ထံမှ ဝေးကွာစေဖို့ ပြုလုပ်ရန်၊ ဘုရားသခင်ကို သစ္စာဖောက်ရန်အတွက် ကြိုးစားလျက် စာတန်သည် ကျွန်မတို့အား သွေးဆောင်ရန်၊ စမ်းသပ်ပြီး ဖိနှိပ်ရန် မည်သည့် လူ၊ ဖြစ်ရပ် သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာတို့ကို မဆိုအသုံးပြုရန်အတွက် ကြိုးစားတွေးတောလျက်ရှိသည်။ ကျွန်မတို့က သမ္မာတရားမရှိလျှင်၊ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုလည်း မရှိပါ၊ ကျွန်မတို့က ဝိညာဉ်ရေးရာ တိုက်ပွဲကို ရှင်းလင်းစွာ မမြင်တွေ့နိုင်ပါက၊ ကျွန်မတို့ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်တွင် ခိုင်မာစွာ မနေနိုင်ပါက၊ ကျွန်မတို့သည် ဇာတိပကတိ၏ အကျိုးခံစားမှုများနှင့် နှစ်သက်မှုများနောက်သို့ လိုက်နိုင်ခြေရှိမည်ဖြစ်သည်၊ စာတန်၏ ကွန်ရက်ထဲ ကျရောက်ပြီး၊ ကျွန်မတို့ သက်သေခံချက်များကို ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။ ခရစ်ယာန်များအနေဖြင့် စာတန်၏ လှည့်စားမှုများကို သတိပြုမိရန် နည်းလမ်းကို သင်ယူခြင်းသည် အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်မတို့က ဝိညာဉ်ရေးရာ တိုက်ပွဲအလယ်တွင် စာတန်၏ လှည့်စားမှုကို ထိုးဖောက်မြင်နိုင်ပြီး၊ ဘုရားသခင်အတွက် သက်သေခံနိုင်ရန် မိမိတို့ကိုယ်ကို မည်သို့ လုပ်ဆောင်မည်နည်း။ ကျွန်မအနေဖြင့် စာတန်၏ စုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းအပေါ် အောင်ပွဲခံနိုင်ရန်အတွက် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းသုံးသွယ် ကို သင်နှင့် မိတ်သဟာယ အချို့ဝေငှလိုပါသည်။Read More »
【Live】ဧဝံဂေလိတရားဗီဒီယို – သခင် ပြန်ကြွလာပြီး စာစောင်ကို ဖွင့်လေပြီ
August 30, 2019 August 31, 2019 kingdomsalvationmyLeaveacomment
ကြည့်ရှုသူများ ခင်ဗျာ မင်္ဂလာပါ။ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်ရဲ့@တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကိုကြည့်ရှုကြတဲ့အတွက်@ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ညီအစ်ကို မောင်နှမအားလုံးက ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာ ပရောဖက်ပြုထားတဲ့@ စာစောင်ငယ်အကြောင်းကို သိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာစောင်က ဘာကို ရည်ညွှန်းတယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတိုင်းမှာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အယူအဆရှိကြပါတယ်။ လူတစ်ချို့က စာစောင်ဟာ သမ္မာကျမ်းစာကို@ရည်ညွှန်းတာဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ တချို့ကလည်း ကျမ်းစာထဲမှာ ဒီလိုပြောထားတဲ့အတိုင်း ယုံကြည်ကြတယ်။ “ထိုအခါတဘက်တချက်၌ အက္ခရာတင်၍ တံဆိပ်ခုနစ်ချက်ခတ်သော စာစောင်ကို ပလ္လင်တော်ပေါ် မှာ ထိုင်တော်မူသောသူ၏ လက်ျာလက်၌ငါမြင်၏။… ထိုစာစောင်ကိုဖွင့်၍ကြည့်ခြင်းငှါ… အဘယ်သူမျှမတတ်နိုင်။…တယောက်ကိုမျှ ရှာ၍မတွေ့…” (ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၅:၁-၃) “ယုဒအမျိုး ခြင်္သေ့သတည်းဟူသော ဒါဝိဒ်၏ အမြစ်သည် ထိုစာစောင်ကို၎င်း၊ တံဆိပ်ခုနစ်ချက်တို့ကို၎င်း ဖွင့်ခြင်းငှါ အောင်မြင်လေပြီ” (ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၅:၄-၅) စာစောင်ငယ်ကို တံဆိပ်ခုနှစ်ခုနဲ့ ခတ်ထားတယ်၊ စာစောင်ပါ အကြောင်းအရာကို ဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာ@မရေးမှတ်ထားဘူးဆိုတာနဲ့ ပြန်ကြွလာတဲ့ သခင်ကလွဲလို့@ဘယ်သူမှ ဒါကို မဖွင့်နိုင်ဘူးဆိုတာ ရှင်းပါတယ်။ နေ့တိုင်း ကျမ်းစာကို ကျွန်တော်တို့ ဖတ်မှတော့ အဲဒါက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး စာစောင်ငယ် ဖြစ်နိုင်မှာလဲဒီတော့ စာစောင်ငယ်က ဘာကို တကယ်ရည်ညွှန်းတာလဲ အဲဒါက ဘယ်လိုပွင့်မှာလဲ သခင်ယေရှု ပြောခဲ့တာက၊ “သင်တို့အား ငါပြောစရာစကားအများရှိသော်လည်း၊သင်တို့သည် ယခုမခံနိုင်ကြ။ သမ္မာတရားနှင့်ပြည့်စုံသော ထိုဝိညာဉ်တော်သည် ရောက်လာသောအခါ၊ သမ္မာတရားကို သင်တို့အား@အကြွင်းမဲ့ သွန်သင်ပြလိမ့်မည်။” (ရှင်ယောဟန် ၁၆:၁၂-၁၃) သခင်က သူနောက်ဆုံးသောကာလမှာ ပြန်ကြွလာတဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ကို သူ့ရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်တွေကို ဖော်ပြပြီး@သမ္မာတရားအားလုံးဆီ လမ်းပြမယ်လို့@ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။ အခုက နောက်ဆုံးသော ကာလရဲ့ အဆုံးသတ်ဖြစ်နေပါပြီသခင် ပြန်ကြွလာနှင့်ပြီးပြီဖြစ်သလို စာစောင်နဲ့ တံဆိပ်ခုနှစ်ခုကို ဖွင့်ပြီးပါပြီ။ ဒီတော့ ဖွင့်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ ဒီစာစောင်က နောက်ဆုံးသော ကာလမှာ ပြန်ကြွလာတဲ့ သခင် ဖော်ပြတဲ့ သမ္မာတရားနဲ့ ဘာများပတ်သက်မှုရှိပါသလဲ ဒီအရာအားလုံးအပြင် နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတွေကို ထုတ်ဖော်ပြတဲ့ ဒီအစီအစဉ်အတွက် ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ပါ။Read More »
Myanmar Gospel Skit (နွားတင်းကုပ် ထဲတွင် စုရုံးခြင်း)
August 21, 2019 August 21, 2019 kingdomsalvationmyLeaveacomment
လတ်တလောတွင် ဘုရားမဲ့ဝါဒီ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအစိုးရ၏ ခရစ်ယာန်များအပေါ် ညှဉ်းဆဲခြင်းသည် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ တိုးလာနေသည်။ ယုံကြည်သူများသည် သူတို့၏ ယုံကြည်မှုအား လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ခြင်းအပေါ် ကန့်သတ်ခြင်းများကို အဆက်မပြတ် ကြုံတွေ့နေရကာ၊ ငြိမ်ချမ်းစွာ စုရုံးဖို့ရန် နေရာတစ်နေရာမှပင် ရှာ၍မတွေ့နိုင်ကြပေ။ ရွေးချယ်စရာအခြားမရှိဘဲ၊ လျူရှုမင်းသည် ညီအစ်ကို မောင်နှမများနှင့်အတူ စုရုံးခြင်းကို သူမ၏နွားတင်းကုပ်၌သာ လက်ခံဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ သို့သော် ၎င်းတို့စုရုံးနေစဉ်အတွင်း၊ ရွာလူကြီးများသည် တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက် အနီးတဝိုက်တွင် လာရောက် ကြည့်ရှုကြပြီး အကြောင်းပြချက် အမျိုးမျိုးပြကာ ပြီးနောက် တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအစိုးရရဲများကိုပါ အတွင်းသို့ ခေါ်ဆောင်လာသည်…. လျူရှုမင်းနှင့် သူမ၏ညီအစ်ကို မောင်နှမများ သူတို့၏ စုရုံးခြင်းကို အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်လား၊ သူတို့ကို ရှာတွေ့သွားမည်လား၊ သူတို့ အဖမ်းခံရမည်လား၊ တရုတ်နိုင်ငံရှိ ခရစ်ယာန်များ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအစိုးရ၏ ညှဉ်းဆဲမှုအောက်တွင် သူတို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို မည်ကဲ့သို့ မဆုတ်မနစ်လုပ်ဆောင်ရန် စီမံကြောင်းကို သင့်အား ဤ နွားတင်းကုပ်ထဲတွင် စုရုံးခြင်း ဟာသပြဇာတ်တိုလေးက ထုတ်ဖော်ပြပေးသည်။
ဆုတောင်းရန် သင်ယူခြင်း- ပြဿနာသုံးရပ် ဖြေရှင်းလိုက်ခြင်းက ကျွန်တော်တို့ကို ဆုတောင်းနည်း သင်ကြားပေးသည်
Myanmar movie 2019 | ဘုရားသခင်၏ ကွယ်ကာမှုနှင့်ဆိုင်သော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ
August 20, 2019 kingdomsalvationmyLeaveacomment
မုန်တိုင်းတွေက ဘာမှအချက်မပြဘဲဝင်ရောက်လာပြီး လူသားတွေ အပေါ် ကံဆိုးမှုတွေ ညတွင်းချင်းကျရောက်လာနိုင်တယ်လို့ လူတွေ မကြာခဏပြောလေ့ရှိပါတယ်။ သိပ္ပံပညာ၊ ခေတ်မှီပို့ဆောင် ဆက်သွယ်ရေးတွေနဲ့ ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းကြွယ်ဝမှုတွေ လျင်မြန်စွာ တိုးတက်များပြားလာတဲ့ဒီနေ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ ကျွန်ုပ်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သဘာဝဘေးဆိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်မှုက တနေ့ထက် တနေ့ပိုမိုများပြားလာပါတယ်။ သတင်းစာ ပဲလှန်လှန် တီဗီပဲဖွင့်ဖွင့် အများဆုံး တွေ့ရမြင်ရတဲ့ သတင်းတွေက စစ်ပွဲတွေ မြေငလျင်လှုပ်တာတွေ ဆူနာမီတွေ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်းတွေ မီးလောင်တာ ရေကြီးတာတွေ လေယာဉ်ပျက်ကျတာတွေ မိုင်းတွင်းမတော်တဆမှုတွေ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင်း မငြိမ်မသက် ဖြစ်မှုတွေ ပြင်းထန်တဲ့ ပဋိပက္ခတွေ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေ စတာတွေပဲဖြစ်နေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံနေရတာတွေ အားလုံးဟာ သဘာဝကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ကပ်ဘေးတွေနဲ့ လူကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ ဘေးဒုက္ခတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကပ်ဘေးဒုက္ခတွေဟာ မကြာခဏဖြစ်ပေါ်နေသလို ပိုပိုပြီးလဲ တိုးပွားများပြားလာပါတယ်။ ဒီဘေးဆိုးကပ်ဆိုးတွေရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ ထိုးနှက်မှုကြောင့် ဘေးဒုက္ခတွေ သွေးချောင်းစီးမှုတွေ ကိုယ်လက်အအင်္ဂါ ချို့တဲ့မှုတွေ နဲ့ သေဆုံးမှုတွေအထိဖြစ်စေပါတယ်။ ကံဆိုးမှုတွေက ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်းကျင်မှာ အချိန်မရွေးဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး၊ ဘဝရဲ့တိုတောင်းမှု ထိလွယ်ရှလွယ်ရှိမှုတွေကို အလေးထားမိစေပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ ဘယ်လိုဘေးဆိုးကပ်ဆိုးတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းလဲမရှိသေးပါဘူး။ အဲဒီအပြင် ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ချက်တွေ လုပ်ဆောင်ထားရမယ် ဆိုတာလဲမသိကြပါဘူး။ လူသားမျိုးနွယ်ဝင်တွေအနေနဲ့ ဒီကပ်ဘေး ဒုက္ခတွေကလွတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင် ရမယ်ဆိုတာလဲမသိကြပါဘူး။ သင်သိချင်တဲ့ အဖြေကို ဒီအစီအစဉ်မှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ အကာအကွယ်ကို လက်ခံရရှိခြင်းဆိုတဲ့ တခုတည်းသော နည်းလမ်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး၊ ဒါကသာ သင့်ကို ကပ်ဘေးဒုက္ခတွေကနေ ရှင်သန်လွတ်မြောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
အကြံပြုစာမျာ: ခရစ်ယာန် တရားဒေသနာ